Kpakpando nke kpakpando | Network Meteorology
Anyị na-ebi na mbara ala mara mma nke ukwuu, ebe ọtụtụ ahịhịa na ụdị anụmanụ na-ebikọ ọnụ na-eme ihe niile iji dịrị ndụ na imeghari na ụwa ebe ha ga-eche ọtụtụ nsogbu ihu kwa ụbọchị. Ma, ọ bụrụ na n'ehihie anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ agba na ụdị ndụ, n'abalị ihe nkiri ahụ na-aga n'ihu, naanị oge a bụ onye protagonist bụ kpakpando nke eluigwe.
Obere oge ka anyi ghotara ya, obughi n’efu, o di nfe ichefu na odi ndi ozo di ebe ozo di, enwere ike di ndu. Nde ndị ahụ niile na-egbuke egbuke nke anyị na-ahụ mgbe ụfọdụ bụ kpakpando, mbara ala, comets na nebulae nke dịrị ọtụtụ nde afọ gara aga.
1 Obere akụkọ banyere mbara igwe
2 Gịnị bụ mmetọ ọkụ?
2.1 Enwere ihe ngwọta?
3 Echiche aboutgha banyere kpakpando
3.3 Milky Way
3.4 Asaa Krttika
4 Ebe kachasị mma iji hụ kpakpando
4.1 Ogige Ntụrụndụ Monfragüe (Cáceres)
4.2 Mauna Kea Observatory (Hawaii)
4.3 Cañadas del Teide (Tenerife)
4.4 Ọzara Saịnaị (Ijipt)
5 Foto ndị ọzọ nke igwe kpakpando
Obere akụkọ banyere mbara igwe
M hụrụ abalị n'anya. Obi iru ala nke a na-eku ume dị ebube, ma mgbe elu igwe dị ọcha ma ị nwere ike ịhụ obere akụkụ nke eluigwe na ala, ọ bụ ahụmịhe dị egwu. N'ezie ndị ahụ na-enyocha mbara igwe nwetakwara mmetụta ndị ahụ na mmetụta ndị ahụ ndị na-agụ kpakpando niile nwere, ma ọ bụ, n'ụzọ dị mfe, ikiri mbara igwe.
Astronomy, site n'uzo, bu sayensị ochie. Obodo ndi mmadu ndi meworo-ma eleghi anya-arara onwe ha nye ikiri igwe. Otu ihe atụ bụ Stonehenge, ụlọ ọrụ megalithic wuru gburugburu 2800 BC. C. nke, ọ bụrụ na elere anya site na etiti ya, na-egosi kpọmkwem ụzọ ọwụwa anyanwụ na-acha n'oge anwụ n'oge anwụ.
N’Ijipt, ndị na-ewu pyramid nke Giza, Cheops, Khafre na Menkaure (ndị Fero nke sitere na usoro ndị eze IV) kere ọrụ ha gburugburu 2570 BC. C. nke mere na ha kwekọrọ na eriri Orion. Ọ bụ ezie na ugbu a kpakpando atọ nke Orion bụ akụkụ nke dị iche na ogo ole na ole na pyramid.
Otú ọ dị, ọ bụ ruo ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na Mee 1609, mgbe onye amamihe bụ Galileo Galilei chepụtara teliskop ga-arụ ọrụ, ịmụtakwu ihe, ihe dị na mbara igwe. N'oge ahụ na Holland, e mepụtalarị mmadụ nke na-enye anyị ohere ịhụ ihe dị anya, mana ekele nke Galilei nke mere ka ihe onyonyo a too elu site ugboro asatọ ruo iteghete, enwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ka e wee nwee ike ịmụ ihe na nyocha ihe niile enwere ike ịmụ. a pụrụ ịhụ ya n’eluigwe.
Ya mere, mmadụ ole na ole nwere ike ịghọta na ọ bụ Anyanwụ na ọ bụghị ụwa dị n'etiti etiti ihe anyị niile, nke bụ nnukwu mgbanwe na-atụle na, rue mgbe ahụ, ọhụụ ala nwere nke eluigwe na ala.
Taa, anyị nwere onyokomita na enyo anya nke na-enyere anyị aka ịhụkwu. Ọtụtụ mmadụ anaghị enwe afọ ojuju n’ịhụ ihe anya ụmụ mmadụ nwere ike iji anya nkịtị weghara, mana ha nwere ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla ịhụ comet, nebulae, na ọbụlagodi, ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, ụyọkọ kpakpando kacha nso. Ma enwere nsogbu nke na adighi mbu: mmetọ ikuku.
Gịnị bụ mmetọ ọkụ?
Mmetọ ọkụ A na-akọwa ya dị ka ìhè nke elu igwe nke abalị nke ọkụ na-esighi ike. Ọkụ oriọna ndị dị n'okporo ámá, ndị nke ụgbọ ala, ndị nke ụlọ, wdg. ha bụ ihe mgbochi ịnụ ụtọ kpakpando. Ọnọdụ a na-akawanye njọ ka ọnụọgụgụ ụwa na-abawanye.
Ọ nwere ọtụtụ nsonaazụ, gụnyere ihe ndị a:
Ike na ego furu efu.
Mara ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Ha na-enye aka na mgbanwe ihu igwe.
Ha na-agbanwe usoro ndụ anụmanụ dị iche iche, yana ahịhịa.
Ọhụhụ nke elu igwe abalị na-efu.
Enwere ihe ngwọta?
N'ezie ee. Gbanye ọkụ n’èzí n’abalị ole na ole, iji ọkụ ọkụ na-azọpụta ọkụ, itinye oriọna ndị dị n’okporo ụzọ na-ezere ihe mgbochi (dịka alaka osisi), na / ma ọ bụ iji atụmatụ ndị nwere ihu n ’ihu igwe na-ezere ịgbasa n’elu. Ha nwere ike ime iji belata mmetọ mmetọ.
Echiche aboutgha banyere kpakpando
Kpakpando bu ihe ndi mmadu kwenyere na ya nke mmadu ji na akuko akwukwo akuko. Otu ihe atụ bụ Pleiades (okwu nke pụtara "nduru" na Greek). Na Gris oge ochie A gwara akụkọ ahụ na dinta Orion hụrụ Pleione na ụmụ ya ndị nwanyị n'anya, bụ ndị nwara ịgbanahụ ya mana naanị ihe ịga nke ọma mgbe Zeus, ọtụtụ afọ gachara, mere ka ha ghọọ nduru nke gbagoro na mbara igwe ịghọ ìgwè kpakpando ndị anyị ka maara taa dị ka Pleiades.
Dabere na Pawnee, agbụrụ amaala nke etiti North America, chi Tirawa zigara kpakpando ka ha buru mbara igwe. Fọdụ lekọtara igwe ojii, ifufe na mmiri ozuzo, nke mere ka ala nke ụwa nwee ike ibu; agbanyeghị, enwere ndị ọzọ zutere akpa nke ajọ ifufe, nke butere ọnwụ na mbara ụwa.
Ndị Mayan kwenyere na nke ahụ uzo Milky bu uzo ebe nkpuru obi jere ije na nkpuru obi. Akụkọ ndị ndị a kọọrọ, bụ ndị hibere otu mmepeanya kachasị elu n'oge ha, dabere na mmekọrịta nke mmegharị nke kpakpando. Maka ha, igwe kwụ ọtọ nke Milky Way nke a ka nwere ike ihu taa ma ọ bụrụ na mbara igwe doro anya, nọchiri anya oge okike.
Na India kwenyere na kpakpando nke Ursa Major bu ndi anakpo Rishis: ndi amamihe asaa ndi luru umuaka nwanyi asaa ndi Krttika ndi ha na ha biri n’elu ugwu rue mgbe Agni, chi oku, huru umu nne nwanyi Krrtika n’anya.. Iji gbalịa ichefu ịhụnanya ọ nwere, Agni gara n'oké ọhịa ebe ọ zutere Svaha, kpakpando Zeta Tauri.
Svaha hụrụ Agni n'anya, na imeri ya ihe o mere bụ igbanwe onwe ya dịka otu n'ime ụmụ nwanyị nwanyị Krrtika. Agni kwenyere na ya emeriwo ndi nwunye Rishis. N'oge na-adịghị anya, Svaha mụrụ nwa nwoke, ya mere asịrị malitere ịgbasa na mmadụ isii n'ime ndị nwunye Rishis bụ nne ya, na-eduga na mmadụ isii n'ime ndị isi asaa ahụ na-agba nwunye ha alụkwaghịm.
Arundhati bụ naanị onye ya na di ya kpọrọ kpakpando Alcor. Isii ndị nke ọzọ hapụrụ wee ghọọ Pleiades.
Ebe kachasị mma iji hụ kpakpando
Iche mmetọ ikuku, ihe kachasị mma ị ga-eme bụ ịga ebe dị anya site na obodo dị ka o kwere mee ma ọ bụ, nke ka mma, gaa njem gaa otu n'ime ebe ndị a:
Ogige Ntụrụndụ Monfragüe (Cáceres)
Foto - Juan Carlos Casado
Mauna Kea Observatory (Hawaii)
Image - Wally Pacholka
Ọzara Saịnaị (Ijipt)
Image - Stefan Seip
Mana… ma ọ bụrụ na enweghị m ike njem, gịnị ka m ga-eme? Ọfọn, ọ bụrụ na ọ ga-akacha mma ịzụta telescope nke na-adịghị ike. Ọ dị mfe iji ma chọọ obere ndozi (belụsọ idebe ya 🙂). Ọrụ nke telescope a dabere na ntụgharị ọkụ nke ọkụ ya. Mgbe mkpịsị ọkụ ahụ gafere osisi ahụ, ọ ga-agbanwe trajectory ya na-eme ka enyo enyo nke ihe a na-ahụ n'oge ahụ.
Ọnụahịa nke teknụzụ nnabata amalite bụ ihe na-atọ ụtọ, ọ nwere ike ịba uru gbasara euro 99.
Foto ndị ọzọ nke igwe kpakpando
Iji mechaa anyị hapụrụ gị foto ole na ole nke igwe kpakpando. Kporie ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Igwe kpakpando
Uriel nwere dijo
Anyị bụ naanị mbara ala nwere agwa anyị (ikuku, mmiri, ọkụ, ụwa) na… enweghị isi.
Ma mma nke Eluigwe buru ibu, Na-adịghị agwụ agwụ; ike eze kpakpando anyị tụbara anyị "ikerike ọkụ" nke onyinye ya wee kpuchie anyị na polar auroras maka ike ya n'elu magnetosphere anyị iji jupụta ụmụ akwụkwọ anyị na ịtụnanya ma nye anyị Ether, n'azụ, na mgbakwunye na inwe ndị ka elu usoro ọ bụ ezie na naanị ike inwe ekele maka ntakịrị nke Precious ahụ, na-ekele Chineke.
Zaghachi Uriel Esquivel